Ireo Top 10 Soundgarden Songs
Raiso ny fihainoana an'ireny rakitsary lavalava ireny ary ny kavina aloha
Soundgarden dia niorina avy amin'ny rompling, cludgy mafy rock rock ho lasa hery mpanamory ambony ao anatin'ny 10 taona. Ary raha izy ireo dia manana fitsapana tsara indrindra avy amin'ny safidiny, ny hira tena tsara indrindra aminy dia ahitana rakitsoratra lalina lalina sy tsy hay jerena koa aloha. Miaraka amin'izany ao an-tsainao, eto dia ny safidiko manetry tena ho an'ireo 10 lahatsoratr'i Soundgarden.
Azo heverina fa ny hira hira voalohany nihaino an'i Soundgarden, "Outshined" dia nahatratra ny quartier Seattle tao anatin'ny vanim-potoana goavana teo anelanelan'ny vatolampy metaly sy ny vatolampy sarobidy kokoa amin'ny asa fitoriana taty aoriana. Ankoatr'izany, ny hira dia manasongadina ny feon'ilay mpitarika teo aloha Chris Cornell , izay nanasongadina ny fahaizany mandrisika sy mandohalika amin'ny baiko izay toa mampatahotra sy mandresy lahatra.
Ny tarika izay nisy fiantraikany tamin'ny Soundgarden, Led Zeppelin dia mety tsy dia nijery loatra. Fa izay rehetra nandre ny "Hands Over Over" tamin'ny taona 1990 dia hahatsikaritra ny trosa Soundgarden ho an'ny sariitatra rock band 70 taona. Manomboka amin'ny enina minitra, ny "tanana manerana izao tontolo izao" dia mampiseho fa Soundgarden, na dia hatrany am-piandohana aza, dia naniry ny hanandratra hira avo lenta, izay nahitana feon-javatra mahery vaika miaraka amin'ny fihoaram-pefy.
Na dia ny mozika kanto Soundgarden aza dia nahitana tanteraka ny haavon'ny sehatry ny asan'ny tarika, ny Soundgarden dia mety mbola manjavozavo mihitsy - raha ny zava-drehetra, dia nitodika tamin'ny hery matihanina mahery vaika kokoa. Ny lahatsoratry ny "Superunknown" dia loharano iray tsy misy fetra - Cornell mikiakiaka ao anaty vozony, ireo gidra mandia ny rindrina ary ny amponga Matt Cameron dia mitazona ny zava-drehetra miaraka amin'ny hery Brontosaurus. Ny hira dia momba ny zava-misy mampihoron-koditra izay "mampangalatra ny sainao / ary mangalatra ny fanahinao", saingy ny "Superunknown" dia mamorona loko mozika tahaka izany, izay hahafahanao mamoy ny sainao sy ny fanahinao mba hahatsapanao azy hatrany hatrany.
Nahoana io hira io no tsy naharesy? Ny lahatsoratr'izao tontolo izao, izay hita ao amin'ny "Space A Thousand Wide", dia mahita an'i Cornell izay mandalo ny tononkira momba ny mistery iray ao an-tsainy rehefa mamerina ilay fehezan-teny hoe "rahampitso rahampitso" tahaka ny mantra. Nipoitra tamin'ireo gitarista nikiakiaka sy nifarana tamin'ny havoana ny tandroka, ity "Badmotorfinger" ity dia nanindry ny fantsona Soundgarden izay naseho tao amin'ny rakikiriny manaraka, "Superunknown."
Soundgarden dia tsy mifantoka betsaka amin'ny fanehoan-kevitra ara-tsosialy marobe, fa ny singa iray manintona dia ity "Badmotorfinger" ity. Ao amin'ny "Jesus Christ Pose", Cornell dia manakiana ny holier-toy ny namanao izay te hanosika ny finoany amin'ny mpihira. Ny gitaran'i Kim Thayil dia manomboka mihira toy ny helikoptera mandeha ho azy alohan'ny hidirana ao anatin'ireo rantsana metaly sasany rehefa tonga amin'ny fehin-teny mampalahelo ilay hira.
Ny iray amin'ireo hira malaza indrindra ao Soundgarden, "Flower" dia tsy ampy ny famokarana mahavariana mety ho nahatonga azy ho tapakila amin'ny radio tahaka ny maro amin'ireo tarika taty aoriana, fa ho toy ny testamenta amin'ny fampanantenan'ny tarika, mahagaga izany. Ny mpialoha lahatsoratr'ilay horonantsary Nirvana, taty aoriana dia nijery tao amin'ny rakikirany voalohany, "Bleach," "Flower" dia gidara sy amponga mavesatra, miaraka amin'ny feon'i Cornell izay misidina eo afovoan'ny fanafihana.
Manana trosa be i Cornell noho ny fahombiazan'i Soundgarden, saingy tsy tokony hampihena ny fandraisan'anjaran'ny mpiara-belona aminy. Raiso ny "Rusty Cage", izay fanehoan-kevitr'ilay zava-manahirana nataon'i Kim Thayil amin'ny guitarist. Manomboka amin'ny fisokafany tsy mipetrapetraka dia mitsofoka amin'ny rifatra lavidavitra vitany mankany amin'ny lavaka mangatsiaka mandritry ny tetezana, "Rusty Cage" dia lafiny iray amin'ny feo gitara Soundgarden ao anaty fonosana iray mahatalanjona.
Ny felam-pitiavana, mangingina mangina amin'ny tsy fahafaliana, "Fell on Black Days" dia ny "Superunknown's" fanehoana amin'ny ankapobeny ny lohahevitry ny album: mianatra ny fomba hiainana miaraka amin'ny fahatsapana ny faharetan'ny tahotra tsy hay lazaina. Eo amin'ny sehatra, "Fell on Black Days" dia singa tsara tarehy (na dia somary mainty aza), saingy ny tebiteby mitatao amin'ny lalamby dia manana fihenanam-pandehan'ny mpihaino.
Ny Soundgarden dia manalasala amin'ny hoe "Miposaka any ivelan'ny tany", ny fifindrana avy amin'ny andinin-teny mampihetsi-po sy mampihetsi-po amin'ny rivo-mahery iray mahatsiravina. Cornell dia mametraka ny toerana eo am-piandohana miaraka amin'ny laharana voalohany: "Tsy misy na inona na inona / Mamono ahy / na manao ahoana na manao ahoana ny fiezahako." Avy eo, ny hira dia lasa fitsidihana ny fihetseham-pon'ny olona samihafa miaraka amin'ny fahatsapana ny zava-poana. Indraindray, tsapanao fa te hikorontana eo am-pandriana ianao ary maty; Indraindray ianao te hikiakiaka ny havokavoka.
Ho an'ireo izay nanaisotra ny rakikira nataon'i Cornell tamin'ny "Scream" noho ny fiantsoana pop, dia zava-dehibe ny mahatsiaro fa ireo rafitra ireo dia tao aminy na dia tamin'ny andron'i Soundgarden aza. Asehoy A: "Black Hole Sun," episitika iray, baladram-pampitam-baovaon'olon-tsotra iray momba ny faniriana hanadio ny loko madio. Tsy misy olona mahafantatra marina ny momba ireo tononkira, fa ny feon-kiran'i Cornell sy ny vazivazin'ny tarika, ny mahery vaika mpihetsiketsika dia tena mahery tokoa ka tsy hiraharahanao.
Ireo hira faha-25 tsara indrindra
10 Albums obscure izay lasa Classics
Ireo Rap 15 Raphaques Raphaques
Kix: '80s East Coast Hair Band Band
Top 10 Top Songs Novelty
Ny ankamaroan'ny hira politika
Miala Amin'ny Dinosaurs ve ny Dilozy?
Fanazavana ara-tsosialy momba ny fifandraisana amin'ny devoly
5 Fepetra ho an'ny Equilibrium Hardy-Weinberg
Top 11 boky: Prussia
New Mexico Geological Attraction and Destinations
¿Tienen derecho a la america ciudadanía todos les bebés que nacen en EEUU?
Ny fahaveloman'ny fittest?
Fanomezana maimaim-poana maherin'ny $ 100
Lisitry ny asa nataon'i James Fenimore Cooper ho an'ny mpamaky tsy manan-tsiny
Fanorenana Tonic Triads
Lisitr'ireo fandaharam-pianarana amin'ny oniversite 10 Winningest amin'ny Tantara
Fiatoana mitsidika ny planeta
Kitzmiller v. Dover, ny ady an-trano noho ny fikolokoloana
Firy ny isan'ny fanomboana an'i Jesoa teo amin'ny hazo fijaliana?
Mampiasa ny tsy fanarahan-dalàna taorian'ny fanomanana
Misafidiana ny tondroin-dàlana havanana amin'ny club golf
Fomba hitadiavana ny pantsy mihazakazaka